Ogaden News Agency (ONA) – Qoraalka uu Tibeba Esheta cinwaanka uga dhigay ” Asbaabaha Dhabta ah ee keentay mushkiladda Ogadenya 1942 ilaa 1960″
Qoraalka uu Tibeba Esheta cinwaanka uga dhigay ” Asbaabaha Dhabta ah ee keentay mushkiladda Ogadenya 1942 ilaa 1960″
Maqaaal aad u qiimi badan oo sixitaan ah oo ka xogwaramnaya taariikhda halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ayuu Dr. Faysal Rooble kaga jawaabay maqaal uu hadda ka hor qoray nin lagu magacaabo Mr. Tebeba Esheta oo ah nin Axmaara ah oo jaamacadda Asmara wax ka dhigi jiray 1990-meeyadii. Maqaalkan oo shabakadda Wadheernews lagu soo qoray ayuu Dr. Faysal ku sheegay inuu kaga jawaabayo waxyaabaha uu qoray Mr. Tebeba isagoo sheegay inay awoowgii iyo reeraha uu ka dhasay ay si gaar ah u taabanayso arinta ku saabsan kacdoonkii Gariga ee 1941-42 iyo 1948-57. Wuxuu Faysal Roble ku xusay qoraalkiisa in taariikhda uu soo qaatay Tebeba ay tahay mid uu kala soo dhex baxay qoraalada Itobiya, inkastoo uu dadaalay oo taariikha badan uu soo faagay, hadana waxyaaba badan oo xaqiiqada ka fog ayuu soo qaatay Mr. Tebeba.
Wuxuu kula taliyay Dr. Faysal dadka aqoonta leh inay aad u quusaan taariikhda marka ay baadhayaan taariikhda dagaaladii iyo halganadii Somalida oy isweydiiyaan su’aalaha muhiimka ah sida; Muxuu halganka Somalida ay kula jirto Itobiya u yahay mid joogta ah? Muxuu weli u socdaa halganka Somalida ay ku sugayaan nabad-galyadooda iyo cadaaladooda inkastoo ay soo mareen abaaro badan iyo dagaal aan dhamaad lahayn? Su’aalahaa isagoo ka ambaqaadaya ayuu Dr. Faysal Rooble taariikhii dhacay waqtiyadaa ka xogwaramay.
Wuxuu Dr. Faysal hordhac ahaan u xusayaa taariikhda Itobiya ay ku qabsatay Somalida uu ahaa dagaal joogta ah iyo ciqaab wadareed naxariisdarro ah. wuxuuna sheegay inay taariikhdaa wadaagaan xad-gudub joogta ah oo Itobiya ay wado iyo mintidnimo joogtada ah oo shacabka Somalida ay ku raadinayaan xalka dhibaatada haysata. Su’aalo aad muhiim u ah ayuu soo hor dhigay Dr Faysal aqoonyahanka arimahan Somalida iyo Itobiya wax ka qora isagoo tusaale ahaan u soo qaatay qoraalka Tobias Hagmann oo u qoray si ka duwan oo ka xeel dheer siduu Tebebe u fududestay arintan.
Tobiyas Hagmann wuxuu yidhi; “Qadiyadda Ogadenya ma’aha arin ugub ah. Xidhiidhka ka dhexeeya Itobiya iyo dhulka hoose ee Somalida wuxuu ku dhisan yahay dagaal siyaasadeed oo ciidamada Itobiya ay ku lug leeyihiin iyo ciidamo goboleed nabadda sugaya iyo dhibaatooyin aadminimo oo ka dhashay abaaraha, daadadka, dagaalada iyo barakaca dadweynaha. Weerarkii ONLF ay ku qaaday shirkadii Shiinaha ee shidaalka Dhagaxbuur bishii Abriil 2007 wixii ka horeeyay haya’daha caalamka, diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo haya’daha samafalada intaba way ka indha dadbi jireen arimaha maalin walba ka dhacaya Ogadenya.”
Hordhacaa ka dib wuxuu gudagalay Dr. Faysal Rooble inuu baadho taariikhda halgan ee shacabka S. Ogadenya isagoo sheegay inay ka qoda dheertahay siduu u dhigay Mr. Tebeba oo yidhi waxaa abuuray gumaysigii Ingriiska oo iska indha tiray heshiiskii dhex maray Ingriiska iyo Itobiya 1942. Wuxuu yidhi Dr. Faysal qadiyadda Ogadenya waa arin ka dhalatay shacab la qabsaday oo u dagaalamaya inay helaan cadaalad iyo nabadgalyo. Wuxuuna sheegay inay lagama maarmaan tahay si loo ifiyo xaqiiqada dagaalada iyo halganka ka socda gobolka in la dhilo lakabyada taariikhda ee is-dul saaran. Wuxuu intaa raaciyay in dagaalka ka socda Ogadenya uu ka fac tirsanayo dagaaladii diiniga ahaa ee ka socday gobolka ee bilowday qarnigii 14aad. Wuxuu six eel dheer uga hadlayaa Dr. Faysal dagaaladii soo dhex maray ciidamada Itobiya oo dadka dhaca hayay isla markaana u qaybinayay xoolaha dadweynaha ciidamadooda iyo Amxaarada masiixiga ah ee la socda ciidamada oo loogu talagalay inay dagaan dalka ( — distributed the bounty among the elite Amhara Christians, otherwise known as Naftenyas –Settlers-). Waxaa ka mid ah dagaalada dhacay 1941 – 42 iyo 1948-58 dagaalada ay Somalida u yaqaanaan buu yidhi Dr. Faysal (“Dagaaladii Geriga”). Dagaalka 1aad oo ahaa mid gaaban hasa ahaatee kulul wuxuu ka dhashay markii Itobiya damacday inay soo dajiyaan Amxaarada dhulka Gariga iyo Jaarsada. Ujeedada waxay ahayd in hab dhulgoosi ah loo qaato inta u dhexeysa Harar ilaa Jigjiga. Waxaa arintaa ka dhiidhiyay oo jabiyay ciidamadii Itobiyaanka ahaa ee soo duulay oo ka saaray dhulka loo yaqaano (reserve area) Garad Cali Garad Dalal oo kaashanaya walaalkii Garad Yusuf oo dagaalka hogaaminayay. Kacdoonkan Geri ayaa ahaa mid habaysan oo la odhan karo wuxuu hordhac u ahaa asaaskii 1942 ururkii dhalinyarada ee loo yaqiinay SYC Somali youth Council kaasoo ahaa midka uu ka unkamay xisbigii Somali Youth League (SYL 1947), iyadoo laga sifeeyay Itobiyaankii magaalooyinka oo la wada gubay dhismayaashoodii iyo meelihii ay soo dageen ee Koojaar, Jinacsani iyo Fiyambiiro. Sylvia Pankhurst oo wax ka qortay dagaalkan ayaa sheegtay inuu ahaa dagaal aad u kulul, iyadoo tidhi wuxuu Garaadka qabsan gaadhay Harar ka dib markuu cagta mariyay ciidamadii Itobiya.
Arimaha kalee uu Dr. Faysal ku diiday qoraaga Eretrea Mr. Tebeba waxaa ka mid ahaa siduu u sharxay soo dhaweeyntii Duqqii magaalada Berbera Major Walsh Kacdoonka Garaadka iyo Qorshihii Mr. Bevin ee ahaa in hal dawlad lagu mideeyo umadda Somaliyeed arimahaa oo Tebeba uu ku tilmaamay inay sababeen kacdoonka Garaadka. Wuxuu yidhi Dr. Faysal; waxaa isweydiin mudan, sababta uu Major Walsh u soo dhaweeyay kacdoonka Garaadka socdaalkii uu ku yimid Jigjiga 1942? Sababta uu walsh u ogolaaday qabsashadii Garaad Cali dhamaan dhulka loo yaqaano Reserve Area oy ku jirto Harar?
Dr. Faysal wuxuu sheegay inuu Major Walsh la socday xaaladaha qoyska Geri oo qayb ka mid ah oo ah Reer-Awmame ay daganaayeen gobolka Berbera. Sidaa darteed sheegashada Itobiya inay leedahay dhulka Reserve Area waxay ugu muuqatay Major Walsh damac gumaysi inay tahay oo lagu soo afjari karo kacdoonka Geri. Wuxuu kaloo ogsoonaa in dawladda Ingriiska ay u aragto Itobiya inay tahay quwad ku jirta looltanka gumaysiga dhulka Somaliyeed.
Dagaaladii Geri ee socday 1948-57 iyo dhibaatada haysata umadda Somaliyeed ilaa maantadan oo dad badan ay ku nafwaayeen ayuu ku tilmaamay Dr. Faysal inay sabab u ahayd 3ex arimood. Go’aankii ay qaateen guddigii isbahaysigii ku guulaystay dagaalkii 2aad (Allied Powers Commission) 1948dii ee dhulka Somaliyeed ee Hawd iyo Reserve lagu siiyey Itobiya, taasoo kala qaybisay umaddii Somaliyeed. Waxaa kaloo ka mid ah arimaha keenay kacdoonka Geri ee Dr. Faysal uu xusay qodobka 127 ee lagu daray dastuurka oo Somalida ka soo qaaday wax aan jirin isla markaana siiyay awood dawladeed kaniisada Orthodox Itobiya oy tahay inuu boqorka ka shaqeeyo fidinta diinta Masiixiga isla markaana magaca boqorka lagu xuso isu imaatinada diimeed oo loogu duceeyo. Iyo waliba qodobka 125 oo ka dhigay afka Amxaariga, luqadda rasmiga ah ee boqortooyada. Waxaa kaloo ka mid ahaa canshuur lagu soo rogay dadka –Beeralay iyo xoola dhaqataba – taasoo ay diideen shacabkii Garaadkii Garina uu is-hortaagay.
Maqaalkan oo aad u dheer una xiisa badan ayuu ku soo ururiyay Dr. Faysal in kacdoonkaa Geri uu asaas u noqday kacdoonadii ka dambeeyay uu abuurayna dareen siyaasi ah oo dhaliyay dhaq-dhaqaaqii NasruLaahi ee 1950kii ee Ugaas Maxamuud Majeerteen uu madaxda ka ahaa iyo Sh. Cabdinaasir, labadaa halyay oo aan luminin hamigoodii tawrigaa ahaa iyagoo gaboobay xataa. Waxaa ka dambeeyay Garad Maqtal Daahir oo ka mid ah buu yidhi Dr. Faysal shaqsiga Dagaalyahanada Gobanimadoonka Afrika ugu soo jeedashada badnaa (most charismatic liberation fighters) oo ahaa nin muuqaal dheer oo gadh weyn oo haybad ah leh. Wuxuu sameeyay kacdoonkii Geeshka kaasoo asaas u noqday dhaq-dhaqaaqii WSLF iyo halganka hadda socda ee ONLF.
Ugu dambayntii wuxuu ku tilmaamayaa Dr. Faysal fikirka Tibebe Ashete ee ah inuu Ingriiska walaaqay xidhiidh fiicn oo ka dhexeeyay Amxaaradii la soo dajiyay deegaanada Jigjiga ee Geri iyo Jaarso iyo gabi ahaan Hawd iyo Reserve Area oy iyagu dhiiriglaiyeen Kacdoonkii Geriga inay tahay fakir hooseeya. Arinta dhex taala Somalida iyo Itobiyaanka waa arin gumaysi oo u keenay dhibaatoyin farabadan gobolada Somalida.